Firewalls အမျိုးအစားများ - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ | Gadget သတင်း
Firewalls အမျိုးအစားများ - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
ငါတို့သိပြီးသား firewall ကို network layer သို့မဟုတ် packet filtering ကိုလုပ်ရန်၊ အခြား Firewall အမျိုးအစားတစ်ခုကိုလေ့လာရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ ကျနော်တို့လျှောက်လွှာ layer ကိုသို့မဟုတ် Gateway မှာရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းတို့သည်သူတို့၏အမည်များအရ OSI model (Open System Interconnection, International Standard Organization (သို့) ISO ကွန်ပြူတာများချိတ်ဆက်မှုအတွက် ISO မှဖန်တီးသောပုံစံ) ၏လျှောက်လွှာအလွှာ၏ ၇ အဆင့်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောသူများဖြစ်သည်။
Level7ဆိုသည်မှာအသုံးပြုမည့် protocol များကိုသတ်မှတ်၊ အီးမေးလ်များ၊ FTP ဖိုင်များ၊ ဝဘ်စာမျက်နှာများ (HTTP) စသည့်အချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်းအခြားသူများအကြား။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အသုံးပြုမည့် protocol အမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်သည်။ ဥပမာဒီ tool ကို အသုံးပြု၍ အချို့သော web စာမျက်နှာများကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ ဤစနစ်အတွင်းအထင်ရှားဆုံး firewalls တစ်ခုမှာ Sonicwall နှင့် iTinySoft ဖြစ်သည်.
ရန် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်း - မည်သည့်ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများနှင့် ၄ င်းတို့တစ်ခုချင်းစီသည်မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိမည်ကိုသတ်မှတ်ပါ။
ခ။ Access optimization: အသုံးပြုမည့် protocol များကိုတိုက်ရိုက်သတ်မှတ်ပါ
ဂ။ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းကာကွယ်ခြင်း - ကွန်ယက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်ပြင်ပကျူးကျော်သူများအားကာကွယ်သည်။
ရန် ၎င်းသည် firewall ကို ဖြတ်၍ မသွားသောတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်ရန်မကာကွယ်ပါ။
။ ၎င်းသည်လူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာတိုက်ခိုက်မှုများမှကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ပါ။ (တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်တိုက်ခိုက်သူသည်ဘဏ် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး အနေဖြင့်ခံရသူကိုဆက်သွယ်ပြီးလျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုတောင်းခံသည်။ ဥပမာကဒ်ပြားအသစ်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးရန်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » Firewalls အမျိုးအစားများ - အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
? _ ???? OR§? _? ဟုသူကပြောသည်
ဒီအမေကိုအရမ်း zarra? _ ???? U§? _? seaight assholes ကစားရန်
? _ ???? U§? _?